तोरीपानी होमस्टे : फरकपन, फरक अनुभूति – Gandaki Voice
Home/गण्डकी/तोरीपानी होमस्टे : फरकपन, फरक अनुभूति
तोरीपानी होमस्टे : फरकपन, फरक अनुभूति
सामान्यतया होमस्टे र रेष्टुरेन्ट फरक व्यवसाय हो । दुवैले मान्छेलाई खाना, खाजा खुवाउने बास बसाउने भए पनि यिनीहरुको परिचय नै फरक छ । होमस्टेमा होटल, रेष्टुरेष्टमा भन्दा सस्तो खाना र बासको व्यवस्था हुन्छ ।
तर पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ तोरीपानीमा यस्तै होमस्टे सञ्चालनमा आएको छ । पोखराको विन्ध्यवासिनी मन्दिरदेखि पश्चिमतर्फ आठ किलोमिटरको दूरीमा तोरीपानी नामक होमस्टे रहेको छ ।
त्यहाँ एउटा पुरानो घर छ । उक्त घर होमस्टेका लागि प्रयोग गरिंदै आएको छ । पुरानो घरसंगै नयाँ पक्की घर र सुविधासम्पन्न कोठाहरु हालै निर्माण भएका छन् ।
‘सबै ग्राहक एउटै हुदैनन् । होमस्टेमा हामीले जे दियो, त्यो खानुपर्छ । तर रेष्टुरेन्टमा उनीहरुले अर्डर गरेको अनुसार खान पाउनछन्’, सञ्चालक प्रेम तिमिल्सिना भन्छन् । होमस्टेमा पाहुनालाई ढिंडो, गुन्द्रुक, लोकल कुखुराको मासुका साथै गाउँमा मात्र उत्पादन भएका खानेकुरा खुवाइन्छ । यी चिजबिज सबैले मन नपराउने उनी बताउँछन् ।
गाउँका परिकार मन नपराउनेहरुका लागि लक्षित गरी रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरिएको हो । एक वर्षदेखि संचालनमा आएको होमस्टेमा करिब आठ हजार मानिस त्यहाँ पुगिसकेका छन् ।
होमस्टेबाट बिहान सूर्योदय र साँझ सूर्यास्त हेर्न सकिन्छ । नजिकै प्याराग्लाइडिङ स्पट र सराङकोट छ । फेवाताल देखिन्छ । त्यहाँबाट विश्वशान्ति स्तूपा, पुम्दीकोट सजिलै देख्न सकिन्छ । यस्तै त्यहाँबाट लौलुक, बाम्दी, चापाकोट, पञ्चासे, ठूलाखेत लगायतका भूभागहरु पनि देखिन्छ ।
ठाउँ निकै खुला र फराकिला रहेकाले होमस्टेमा मज्जाले रमाउन सकिन्छ भने ग्रामिण भूभागको अनुभूति लिन सकिन्छ । जाडोमा आगो तापेर बस्न सकिन्छ । पूरानो मोडलको घरमा सुत्नुको मज्जा लिन सकिन्छ ।
चिसो मौसममा पूरानो घरमा बस्दा पाइने न्यानोपन र गर्मी मौसममा बस्दा पाइने शीतलताको अनुभूति जीवनमा कहिल्यै भुल्न सकिंदैन । यो अनुभूति त्यहाँ पाउन सकिन्छ । होमस्टेले एकै पटक करिब १०० जनालाई सेवा दिन सक्छ ।
होमस्टे वरिपरी प्रशस्त जमिन र त्यसमा लटरम्म तरकारी देख्न सकिन्छ । ती सबै तरकारी अर्ग्यानिक हुन् । होमस्टेमा आउने पाहुनालाई रुची अनुसारको तिनै तरकारी खुवाइन्छ । होमस्टे विवाह, पार्टी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमका लागि निकै उपयुक्त ठाउँ रहेको छ ।
को हुन् सञ्चालक प्रेमप्रसाद तिमिल्सिना ?
कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ तोरीपानीमा जन्मिएका प्रेमप्रसाद तिमिल्सिना सानै उमेरदेखि लगनशील, मिहिनेती र इमान्दार थिए । उनको त्यहि लगनशीलता र मेहनतले नै आज यहाँसम्म आउन सफल भएका हुन् ।
प्रेम पैसा कमाउने हुटहुटीले विदेश पनि पुगे । प्रेमले थुप्रै विदेशकोअनुभव बटुलिसकेका छन् । उनी पछिल्लो पटक अमेरिकाको भिसा छोडेर नेपालमै केही गर्नु पर्छ भनेर फर्किएर व्यवसाय सुरु गरे ।
सामाजिक सेवामा समेत निरन्तर लागिपरेका प्रेमले व्यवसाय र समाज सेवालाई एकै साथ अघि बढाउँदै आइरहेका छन् । गाउँको नाम नै तोरीपानी रहेकाले गाउँलाई नै प्रचार गर्ने उद्देश्यले होमस्टेको नाम तोरीपानी राखेका हुन् ।
पर्यटन भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी उनले होमस्टे सञ्चालन गरेका थिए । कोरोना संक्रमणले लकडाउन भएपछि सोही समयमा उनले रेष्टुरेन्ट लगायतका संरचना निर्माण गरेका थिए ।
होमस्टेका एक पाहुनाको अनुभूति
परम्परागत खानपान र नेपाली संस्कृति झल्किने खालको वातावरण छ । तोरीपानी होमस्टेमा हाल सयौं जना बस्न मिल्नेगरी परम्परागत शैलीका घरहरुको व्यवस्था गरिएको छ ।
वाह्य पर्यटनलाई समेत लक्षित गरी बनाइएका सुविधा सम्पन्न कोठाहरु छन् । हेर्दै रहर लाग्दो गरि रोपिएका मौसम अनुसारका अर्ग्यानिक सागपात, तरकारी तथा फलफूलहरु देख्दा त बारीमै बसेर खाउँ-खाउँ जस्तो लाग्दोरहेछ ।
अनि तिनै बारीमा चर्दै गरेका लोकल कुखुरा र खसी, बोका अनि तिनै लोकल स्वादमा रमाउँदै, नेपाली कला संस्कृति झल्कने नाचगान हेर्दै फेवातालको चिसो हावासंगै पोखराको दृश्यले सबैलाइ मोहित र प्रफुल्ल बनाउँदो रहेछ ।
हामी सबैले आन्तरिक पर्यटन तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गरौं । एक पटक तोरीपानी होमस्टे जाउँ र रमाउँ । पछुतो लाग्ने छैन । (यो रामजी बरालले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हो ।)
तस्वीरमा हेरौं तोरीपानी होमस्टे
स्याउ बोक्रासहित खानुको सात फाइदा (के-के हुन् ?)
विहादीमा प्याराग्लाइडिङ पूर्वाधार निर्माण शुरु